Sarina pensilihazo azo tsapain-tanana amin'ny iray amin'ireo varavaran'ny Katedraly Milan | Famoronana an-tserasera
Este Mahagaga ihany ny fanaovana pensilihazo ny mari-pahaizana zava-misy tratra. Niantso ny tenany hoe "Artmoron" ilay mpanakanto ary tsy hitanay ny tranonkalany. Na dia mizara sary sasantsasany amin'ny sangan'ny pensily aza izy mba hanohina anay hatrany amin'ny alàlan'ny fampiasana chiaroscuro.
Artmoron dia nanintona a avy eo am-baravaran'ny Katedraly Milan. Ho hitantsika ny tena sary misy an'io varavarana io hahafahanao mampitaha ny misy ny fahasamihafana, satria ny ambaratongan'ny zava-misy dia tratra rehefa mitady ny tsy fitoviana.
Ary tena afaka milaza isika fa sary izany rehefa mahita ny ampahany amin'ny fivoarana, satria amin'ny takelaka farany Toa mitovy amin'ny sarin'io varavarana io izy io fa tsy ny sary nataon'ny mpanakanto toa an'i Artmoron.
Mahagaga ny asan'ny aloka hita soatoavina chromatic tena nahatratra tsara ary vokatr'izany dia volondavenona sy mainty tsy misy farany, izay ahafahana milalao amin'ny habetsaky ny vatana sy ireo tarehimarika rehetra mivoaka avy eo am-baravarana varahina.
Asa izay tena tsara fianarana momba ny jiro ary ny fomba tokony hiasa. Tsy hahatratra ny ambaratongam-pahombiazana toy izany isika raha manomboka miasa, fa maodely handinihana sy hahitana ny fahasamihafana lehibe mety hitranga amin'ny fitadiavana ireo volondavenona maivana sy ireo maizimaizina ireo.
Mahalala manome ny feony koa i Artmoron mainty ampy hametahana ny halaliny ary asongadino ireo toerana voafaritra tsara ireo. Asa iray hanasongadinana sy hametrahana an'ireo izay tena mahavariana mandalo an'ireto tsipika ireto. Raha fantatray ny anaran'ny kaontinao Instagram na Facebook, dia zarainay izany, ka avelanay tsy fantatra anarana amin'ny artista ao ambadik'ity asa ity izany.
Aza adino ireo asa hyper-zava-misy penina na arina arina tsy lavitra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sarina pensilihazo tsara kalitaon'ny varavarana ao amin'ny Katedraly Milan
Ny Pudding dia mampiseho an-tsary amin'ny 3D ny isan'ny mponina amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao